साथी सालिक मलाई माफ गर… - Damak No.1 Online Patrika
मलाई माफ गर म तिम्रो हत्या/आत्महत्यामा तिम्रो न्याय रबिमा खोजिरहेको छु ।
मेरो भाग्य त्यो हो कि तिमी र म एउटै ठाउमा जन्मियौ।त्यही परिवेशमा हुर्कियौ र मेरो दुर्भाग्य पनि यो हो कि म त्यो ठाउमा जन्मिए जहाँ मानवता भन्ने नै छैन !
काठमाडौबाट लगभग २५-३० किलोमिटर को दुरिमा रहेको हाम्रो जन्मभुमी कर्णाली भन्दै सुगम कहिलै भएन।त्यो भेगले देशमा धेरै मन्त्री जन्मायो तर उनिहरुले आफ्नो बाहेक अरु केही बिकास गरेनन । हुन त बिधालय जीवन देखि नै झगडालु र सबैको आखामा बिझाएको चिज थिए कारण एउटै थियो तिमी जस्तै म पनि अन्यायको लागि लड्ने आवाज उठाउने एक विवेकशिल प्राणी थिए।
साथी सालिकराम मलाई माफ गर म तिम्रो हत्या/आत्महत्यामा तिम्रो न्याय रबिमा खोजिरहेको छु । तिमी मर्यौ या मारियौ त्यो कुरा किनारा लाग्ला भन्नेमा म बिस्वस्थ हुन सकेको छैन किनकी बिगत साक्षी छ दरबार भित्र हजारौ सुरक्षा घेरामा बिरेन्द्रको परिवार मारियो र पनि आज सम्म हत्यारा पत्ता लागेन या लगाइएन। मदनलाई त्रीसुलिमा खसाएर मारियो र पनि आज सम्म हत्यारा खुलेआम कतै अर्को योजना बनाउदै या अरु लास माथी तान्डप खेल्दै बसेको छ। निर्मला त एउटा प्रतिनिधि बालिका हुन जस्को बलात्कार पछि हत्या भयो र पनि कानुन चुपचाप निदाईरहेको छ। छोराको न्यायमा अनसन बसेर पिताले ज्यान गुमाएको पनि यहि आखाले देखेकै हो। अनि म कसरि तिम्रो हत्यारा पत्ता लाग्छ र तिमिले न्याय पाउछौ भनेर विश्वास गरौ साथी।
म कसरी विश्वास गरौ तिमी जस्तो साहसी निडर अनि कर्तब्यनिष्ठ ब्यक्तिले आत्महत्या गर्यौ भनेर । हुन त एक पटक बनाईसकेको नाम जोगाउन र त्यो नाममा दाग नलगाई त्यस्लाई बचाउन धेरै गार्हो हुन्छ। कतै त्यही दागको डरले तिमिले यो गलत निर्णय लियौ कि भन्ने पनि मनमा कहि कतै नआउने हैन तर तिमिले बनाएको भिडियो सयौ चोटि हेर्दा तिमिमा अर्कै पीडा देख्छु। तिम्रो बोलिमा अरुको गन्ध भेट्छु। हुन त तिम्रो र मेरो बाल्यकाल उस्तै तबरले बित्यो भन्दिन किनकी म त्यो भेगकै धनिको नाती थिए साथमा पैशा नभए पनि हजुरबुवाको नाम थियो।तर मैले पनि तिमिले जति कै दुख पक्कै गरेको छु। घन्टौ हिडेर बिधालय गएको छु। घाँस दाउरा बन पाखा घट्ट मेल गरेको छु। तिमी पैशामा बिक्ने ब्यक्ती हौ भनेर पनि म मान्न सक्दिन।
जब जब न्युज२४ मा तिम्रो नाम सुन्थे म गर्वले छाती फुलाउथे कारण मेरो गाउँको मेरो साथी मेरो भाइ आज देशको लागि यस्तो काम गर्दै हिडेको छ। ज्यानको बाजि थापेर भ्रष्ट को भण्डाफोर गर्दै छ। समाजमा चेतना फौलाउदै छ। सालिकराम तिमी त्यो गाउले जन्माएको हिरा थियौ जुन काम मैले र म जस्ता हजारौ लाखौ ले गर्न सकेनन त्यो तिमिले गरेका थियौ। पत्रकारिता पेशा तिम्रो रहर थियो होला पक्कै पनि र त यत्रो बर्ष यो क्षेत्रमा लाग्यौ र न्युज२४ छोडेर पनि फेरि यहि पेशामा अर्को टेलिभिजन मा गयौ। तिम्रो हत्यारा पत्ता लगाउन पनि रबिलाई निर्दोष साबित गरेर बाहिर ल्याउनु छ। तिम्रो भिडियो आफैले बनाएका हौ या बनाउन बाध्य बनाइयो त्यो भोलि अनुसन्धानमा आउला या तिमी सङ्गै यस्को उत्तर पनि खरानी भएर गयो थाहा छैन तर यदि तिमिलाई बाध्य पारिएर खिचिएको हो भने ती हत्यारालाई सजाय नभए सम्म यी कलम र आवाज पक्कै रोकिने छैन।
तर यदि तिमिले आत्महत्या नै गरेका हौ र त्यो भिडियो तिमी आफैले बनाएका हौ भने पनि मेरो मनमा केही कुरा अझै खड्किरहेको छ।सालिकराम तिमिले जुवा खेलेर या जाड रक्सी खाएर पक्कै तिमिलाई ऋण लागेको हैन। तिमिले रामकोट मा घडेरी किन्यौ केही पैशा आफुले दुख गरेर कमायौ केही ॠण लियौ। ॠण लिदा पक्कै पनि यहाँबाट यति आउँछ यो पैशाले ब्याज तिर्छु सावा घटाउछु भन्ने सोचेर नै लिएको होला। जब तिमी सङ्ग तिम्रो तलबले तिमिलाई खान बस्न र दैनिक जिन्दगी चलाउन नै पुग्ने पैशा थिएन भने कुन हिसाबले तिर्छु भनेर लियौ ? कतै तिम्रो मन पनि लोभिएन ? कतै तिमिले पनि दबाब दिएर अरु सङ्ग असुलेर धनी बन्छु भन्ने सपना त देखेनौ ?? ऋण सबैलाई लाग्छ मलाई पनि ॠण छ अझ मलाई त दलालले बाहिर पठाउछु भनेर ७ बर्ष अघि लिएको १२ लाख को ब्याज बढेर अहिले ४० लाख कटिसकेको छ।अब मैले मरेर उस्लाई दोष लगाएर हुन्छ र ? म सङ्ग नै काम गर्ने मेरो साथीहरु अहिले कोहि अमेरिकामा छन कोहि क्यानडामा त कोहि ठुला पोस्ट्मा छन अब मैले उनिहरुले मैले भन्दा धेरै कमाए राम्रो ठाउमा पुगे म यस्तो ठाउमा छु भनेर उनिहरुलाई दोष लगाउन पाए ?
यो भनिरहदा तिम्रो आत्माले यो नभनोस कि त मेरो गाउँको भएर पनि तलाई मेरो न्याय भन्दा रबि प्यारो भयो ? साथी म अझै पनि तिम्रै लागि लडिरहेको छु। बस यति हो निर्दोषलाई फसाएर तिम्रो आत्मालाई म अझै बोझ बोकाउन चाहन्न।
यदि रविले तिमिलाई मर्न बाध्य पारेको केटिको नाममा तिमिलाई ब्लाकमेल गरेको भोलि पाइएमा म रविको बिरोधमा पक्कै आउने छु।तिमिले भनेको जस्तै रविले अकुत सम्पती अनेक ब्यक्ती सङ्ग असुलेको छ भने त्यो पाटोको अनुसन्धान हुनु पर्छ भनेर म पनि भनिरहेको छु र भनिरहने छु। तर तिमिले कम तलब पाउनु मा रवि दोषी म देख्दिन साथी मलाई माफ गर। हो मान्छेबाट अन्जानमा गल्ती हुन्छ।कुनै न कुनै मोडमा मान्छे कसैको मायामा पर्छ चाहे त्यो बिहे अघि होस या बिहे पछि। तिमी प्रेममा पर्यौ आफ्नो बैबाहिक जिन्दगी भुल्यौ।जिबित श्रीमतीलाई मर्यो भनेर प्रेमिका सङ्ग झुट बोल्यौ।जब सबै सामुन्ने आयो तिमी तनाबमा गयौ।कुनै पनि केटि सौता माथी जाना जान जादैनन आज को समयमा।हुन त मायामा सबथोक जायज हुन्छ भनिन्छ तर पनि तिमी जस्तो समाज परिवर्तनको सुचकले केही पक्कै सोच्नु पर्ने हो ? तिमी बैवाहिक जिन्दगीमा खुशी थिएनौ भने कानुनि बाटो लिन सक्थ्यौ र नया जिन्दगी जिउन तिमिलाई कानुन ले र समाजले बाटो खोलिदिएको नै थियो।
गलत साथ त गलत बाटोको परिणाम गलत नै हुन्छ जस्को सिकार तिमी भयौ। तिम्रो बास्तविकता थाहा पाएर अस्मिता (तिमिले नाम लिएको तिम्रो प्रेमिका) तिमी सङ्ग टाढा भइन यो उन्को अधिकार र ब्यतिगत स्वतन्त्रता थियो जस्को तिमिले सम्मान गर्नु पर्थ्यो या उनलाई र सम्झनालाई दुबै सम्झाएर एउटा निर्णयमा पुग्न सक्थ्यौ।तिमी अरुलाई कानुनको दायरामा आउनु पर्छ भन्दै सिकाउदै हिड्ने मान्छेले यसरी हार खान्छौ भनेर म कसरी मानौ ?
सम्झना उमेर र नाताको हिसाबले पनि तिमिलाई बुहारी नै भनेर सम्बोधन गरे।सालिकराम तिम्रो सिन्दुर तिम्रो जिन्दगी तिम्रो इजत सबै थियो कसरी आफ्नो आखाले उस्को शरीरमा त्यत्रो निलडाम देख्दा देख्दै एक पटक हत्या पनि हुन सक्छ त्यता तिर पनि अनुसन्धान होस र दोषिलाई कार्बाही होस भनेर तिम्रो मन ले न्याय मागेन ? कस्को दबाबमा तिमिले मरेको सालिकरामको न्यायलाई पनि मारिदियौ ? हिजोसम्म हत्या नै हो भन्ने उस्को परिवार आज किन मौन छ ? के मा बिके या चुप बस्न बाध्य पारियो।तिमिले त आवाज उठाउनु पर्थ्यो । भोलि उस्को हत्या नै भएको रैछ भने उस्को आत्माले कति सराप्ला ?
अन्त्यमा दोषी जो सुकै किन नहोस सजायको भागिदार हुनै पर्छ। तर दोषी लुकाएर निर्दोषलाई फसाइयो भने त्यस्को परिणाम के होला त्यो पनि बिचार गर्नै पर्ने हुन्छ।सालिकरामले न्याय पाउन र कानुनी राज्यको आभास होस।